Egg tree Machine, Akwụkwọ Egg tree Machine, corrugated katọn Machine - Wanyou
Corrugated katọn Machine
Egg tree Machine
Reciprocating Egg tree Machine
rotary egg tree igwe
Printing Slotting ma na-anwụ Ịcha Machine
egg tree igwe
ike rotary egg tree igwe
Nke a na ụdị egg tree igwe eji n'efu akwụkwọ dị ka akụrụngwa na-emepụta na egg trays maka ọkụkọ ugbo factory ma ọ bụ ndị ọzọ ndị ahịa onye chọrọ nke trays. Ọ pụrụ ime ka ọtụtụ mfe udi na ọtụtụ buru ibu ina egg trays, apple trays, egg katọn, egg igbe, wine trays, akpụkpọ ụkwụ trays, etc..using n'efu akwụkwọ dị ka akụrụngwa.
BFY Series nke mkpa mma vetikal-ịkpụ ịpị ịkpakọba welara
Thin mma vetikal-ịkpụ ịpị ịkpakọba welara merie ndị burr na flaking ọnọdụ mere site ikpeazụ ịkpụ si omenala oké n'akuku mma. The ikpeazụ-ebipụ katọn nwere ezigbo, na-egbuke egbuke, dị ọcha n'ọnụ na-enweghị flaking ịrịba ama. Ọ enhances n'ozuzu àgwà na ọdịdị nke kaadiboodu na karịsịa na-ewetara ndị isi-abawanye na n'azụ track-ebi akwụkwọ mma.
© Copyright - 2019-2020: All Rights echekwabara. Products Guide - Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
Imefusị Akwụkwọ Egg tree Ime Machine, Obere Egg tree Machine, Egg tree Ime Machine, Rotary Type Akwụkwọ Egg tree Machine,